လီဗာပူး vs အာဆင်နယ်? မိုက်ကယ်အို၀င်ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၂ ခန့်မှန်းချက်များ - xyznews.co
လီဗာပူး vs အာဆင်နယ်? မိုက်ကယ်အို၀င်ရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၂ ခန့်မှန်းချက်များ
နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်တွေ အပြီးမှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၂ ဟာ ယခု သတင်းပတ်ကုန်မှာ ကစားသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် တိုက်စစ်မှုးဟောင်း မိုက်ကယ်အို၀င်ဟာ ယခုတစ်ပတ် ပွဲစဉ်တွေ အတွက် သူ့ရဲ့ ခန့်မှန်းချက်ကို ယခုလိုပဲ ချပြသွားခဲ့ပါတယ်။
လက်စတာ vs ချဲလ်ဆီး
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ ပြန်လာချိန်မှာတော့ ပရိတ်သတ်တွေဟာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းနဲ့ စတင်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်စတာဟာ ဒီရာသီမှာ ခြေစွမ်း မတည်မငြိမ် ဖြစ်လွန်းနေပေမယ့် နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေ အပြီးမှာ အင်အားပြန်လည် ပြည့်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်စတာဟာ သူတို့ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပုံစံကို ပြသနိုင်တဲ့ အခါ တကယ်ကောင်းတဲ့ အသင်း ဖြစ်ပြီး ဒါကို မန်ယူနိုက်တက်ကို ၄-၂ နဲ့ နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
သောမတ်တူချယ် အနေနဲ့ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ဘန်လေကို အိမ်ကွင်းမှာ သရေကျခဲ့တဲ့ အပေါ် ဒေါသထွက်နေမှာပါ။ the Blues တို့ဟာ ဇယားထိပ်မှာ ဦးဆောင်နေပေမယ့် ပွဲကို ဖြတ်တဲ့ အပိုင်းမှာတော့ အမြဲတမ်း အားနည်းချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးဟာ ဒီပွဲပြီးရင် ဂျူဗင်တပ် မန်ယူနိုက်တက် တို့နဲ့ ဆက်ကစားရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ကလပ်အတွက် big week ပါပဲ။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီပွဲမှာ ချဲလ်ဆီးရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဒီနှစ်သင်းကြား ကွာခြားချက် အများကြီး မရှိပေမယ့် ကျွန်တော် ကတော့ ချဲလ်ဆီးတို့ ကပ်ပြီး နိုင်သွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ချဲလ်ဆီး ၂-၁ နဲ့ နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၀က်ဖို့ဒ် vs မန်ယူနိုက်တက်
၀က်ဖို့ဒ်ဟာ ရာနေရီရဲ့ လက်အောက် ၄ ပွဲမှာ ၁ ပွဲသာ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး အဲဗာတန်ကို ၅-၂ နဲ့ နိုင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ မေ့လောက်အောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပွဲကျပ်တွေ ဆက်တိုက် ကစားနေရပြီး ရလဒ်တွေ ကောင်းမွန်ဖို့တော့ သိပ်ပြီး မမြင်မိပါဘူး။ မန်ယူနိုက်တက်ဟာ စီးတီးနဲ့ ဒါဘီမှာ စိတ်ပျက်စရာ ခြေစွမ်းကို ပြသခဲ့တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒီအသင်းမှာ ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဆန္ဒ နဲ့ မောင်းနှင်အားတွေ မရှိပါဘူး။ စီးတီးအတွက် တအားကို လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။
ယူနိုက်တက်ဟာ တအားကို ထိန်းကစားလွန်းနေပြီး သူတို့ရဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေနောက်မှာ ပြတ်ကျန်နေပါတယ်။ ဒါဟာ ယူနိုက်တက် အတွက် ideal game ဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဖို့ဒ်ဟာ ပုံစံကောင်း ပျောက်နေပြီး ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ယူနိုက်တက်တို့ ၂-၀ နဲ့ သက်တောင့်သက်သာ နိုင်သွားမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
လီဗာပူး vs အာဆင်နယ်
လီဗာပူးဟာ ဘရိုက်တန်ကို သရေကျခဲ့ပြီးနောက် ၀က်ဟမ်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် ယာဂန်ကလော့ဟာ မပျော်မရွှင် ဖြစ်နေပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေ ကတည်းက ခံစစ်ပိုင်း ပြသနာကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး ဒါကို ဖြေရှင်းသွားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ် ကတော့ ၃ ပွဲဆက် အနိုင်ရထားခဲ့ပြီး ဒီကာလအတွင်းမှာ ပေးဂိုး ၁ ဂိုးသာ ရှိထားခဲ့ပါတယ်။
အာဆင်နယ်တို့ ဘယ်အဆင့်ကို ရောက်နေပြီလဲ ဆိုတာကို ဒီပွဲက အဓိက ဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ လီဗာပူးတို့ အန်ဖီးမှာ နိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်လည် ရောက်ရှိသွားမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အာဆင်နယ်တို့ လီဗာပူး ဘက်ကို ဂိုးတော့ ပြန်သွင်းနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သူတို့ရဲ့ ခံစစ်ကို မယုံကြည်ပါဘူး။ လီဗာပူး ၃-၁ ပါပဲ။
မန်စီးတီး vs အဲဗာတန်
စီးတီးဟာ မန်ယူနိုက်တက်ကို အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ဒါဘီပွဲစဉ်မှာ တအား ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဘောလုံး နဲ့ ပွဲကို ကောင်းစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံး မိနစ် ၃၀ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုင်းဝေါ်ကာဟာ နောက်တန်းမှာ အရမ်းကောင်းအောင် ကစားနေပြီး လက်ရှိမှာ ကန်ဆယ်လို နဲ့ ဝေါ်ကာ တို့ထက် ပိုကောင်းတဲ့ full back အတွဲ မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
အဲဗာတန်ဟာ စပါးနဲ့ ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့ပါတယ်။ အဲဗာတန်ဟာ အဲဒီပွဲစဉ် မတိုင်မီ ၃ ပွဲဆက် ရှုံးထားခဲ့တာကြောင့် အနည်းဆုံးတော့ ရှုံးပွဲ ရပ်တန့် သွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ စက်တင်ဘာလ ကတည်းက နိုင်ပွဲပျောက်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဘင်နီတက်ဇ် ဆီမှာ ဖိအားတွေ များပြားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်မှာလည်း အဲဗာတန်တို့ ရလဒ်ကောင်းလာဖို့ မရှိသေးပါဘူး။ စီးတီးဟာ အကောင်းဆုံး ပုံစံ ရရှိနေပြီး အိမ်ရှင်တို့ရဲ့ နိုင်ပွဲကလွဲပြီး ကျွန်တော် ဘာမှ မမြင်မိပါဘူး။ စီးတီးတို့ ၃-၀ နဲ့ နိုင်မှာပါ။
တော့တင်ဟမ် vs လိဒ်
နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေဟာ စပါးအတွက် အချိန်ကိုက် ရောက်လာခဲ့ကာ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ ကွန်တီအတွက် အလုပ်လုပ်ချိန် ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ကွန်တီဟာ အရမ်းတော်တဲ့ နည်းပြဖြစ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ အိုင်ဒီယာတွေ ပျံ့နှံဖို့အတွက် အချိန်လိုအပ်ပါတယ်။ စပါးဟာ အံ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် လိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဂိုးကန်သွင်းမှု အနည်းဆုံး အသင်း ဖြစ်နေပြီး ဒါဟာ ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ထားပါတယ်။
လိဒ်ဟာ နောက်ဆုံး ၃ ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ပေမယ့် သရေပွဲတွေကို နိုင်ပွဲအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ လိဒ်ဟာ ဒီရာသီ clean sheet ၁ ကြိမ်သာ ရထားခဲ့ပြီး ဒီအပိုင်းမှာ သူတို့ထက် နည်းတဲ့သူ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် ကတော့ လိဒ်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အဝေးကွင်း ပွဲစဉ် ဖြစ်လာမယ်လို့ မမြင်မိပါဘူး။ ကွန်တီဟာ ဒီပွဲကနေ စတင်ကာ နိုင်ပွဲတွေ ရရှိဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေမှာ ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ကစားသမားတွေ ကလည်း ဒီစိန်ခေါ်မှု အတွက် အသင့်ဖြစ်နေမှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ စပါးတို့ ၂-၀ နဲ့ နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
နယူးကာဆယ် ၁-၁ ဘရန့်ဖို့ဒ်
ဘန်လေ ၁-၁ ခရစ်စတယ်ပဲလေ့စ်
အက်စတွန်ဗီလာ ၁-၂ ဘရိုက်တန်
၀ုဖ် ၁-၁ ၀က်ဟမ်း
နော့ရစ်ခ်ျ ၀-၂ ဆောက်သမ်တန်
Previous Article လက်ရှိ အာဆင်နယ် အသင်းကို ဟူလီယာ လက်ထက် လီဗာပူး အသင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ချီးကျူးလိုက်တဲ့ ကာရေဂါ
Next Article အာဆင်နယ် နဲ့ ပွဲမှာ မာနေး ၊ ဟန်ဒါဆင် ၊ ရော်ဘတ်ဆန် တို့ ကစားပေးနိုင်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်တဲ့ ကလော့ပ်